Russian mari | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home Russian mari RSS
The Ruble ndiye currency mari Russian pamusoro
The Ruble ndiye currency mari Russian pamusoro. It rinoshandiswawo sezvo currency South Ossetia uye Abkhazia izvo nemisanganiswa mbiri dziri zvisina kukwana kuzivikanwa. The Ruble akanga vaichimboona sezvo currency Soviet Union uye Russian Empire vasati pakupedzisira vakarambana. Nyika Belarus anewo mari chete zita. 100 kopeks kuita 1 Ruble. The Russian mari asina chiratidzo kuti unoshandiswa pamutemo, Zvisinei “py6” ane chidimbu kuti zvinowanzodavirwa kushandiswa. Various zviratidzo vanoonekwa sezvinhu zvino kusarudza chepamutemo chiratidzo.
shoko “Ruble” rinobva pashoko “rubit” zvinoreva kuti “kutema”. Kare, Ruble haana zvechokwadi yakagadzirwa mari; asi zvakanga chiyero ukoshi uye uremu. Other kupfuura kopeks, ari Ruble inogona dziya kupinda altyn (3 kopecks), ari grivennik (10 kopecks), ari polupoltina (25 kopecks), uye poltina (50 kopecks). Maiva mugore 1704 kuti hurumende yeRussia vakatanga akadzika rubles sirivha Russian mari. 1 Ruble akanga pakutanga aikoshesa panguva 28 GM dzesirivha asi 1760 wacho payo devalued kuti 18 GM esirivha. Pakati pamakore 1756 uye 1779, Mari goridhe yakapiwa uye pakati pamakore 1770 uye 1771, Mari emhangura yakapiwa. Assignatsii, vakanga bepa wevimbiso manotsi yakapiwa pakati years1769 uye 1849.
The Russian mari kwave kuchiita kuderera kukuru ukoshi hama kuti nezvimwe dzeEurope. Saizvozvo, kurutivi kuguma August uye September mangwanani 2014, izvozvo akabata nhoroondo neyakaoma.
VokuRussia vari kutambura kubva Economic Depression uyewo. zvisinei, vanhu vanonyatsoziva matambudziko kusonganirana devalued wokuRussia mari. The Ruble wacho ukoshi kwave akabvumira kuti achawa repasi pamusoro kwevanyori dhora uye euro. Izvi zvaibvumirwa nokuti upfumi Russian yakasungirwa ndashandisa kuti mafuta, uye sezvo mafuta unoshambadzirana panguva $49 mudhiramu vari vachikuvadza. Ndakaverenga kumwe kuti Russia inoda mafuta kuva pamusoro $70.00 por bharero kuitira kuti kudzikamisa bhajeti ravo